Sina Runjin © Krunt ™ -N2000 Fanamboarana milina fanala sy gilasy | Runchen
Afangaro amin'ny rivotra ny slurry ary ataovy mangatsiaka mba hamokarana gilasy. Ny milina dia afaka mamokatra avy hatrany ny gilasy misy kalitao mitovy. Izy io koa dia azo ampiharina amin'ny fanamafisana ny vokatra tsy gilasy.
Frunt ™ -N2 milina mangatsiaka mitohy mifanaraka tanteraka amin'ny 3-A fenitra ara-pahasalamana an'ny
Ny Fikambanan'ny mpamatsy indostria momba ny sakafo sy ronono, Etazonia.
Ny rafitra, takelaka mpiambina ary ny rafitra fantsom-pitaterana milina vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Ny faritra rehetra mifandraika amin'ireo akora mifangaro sy ny gilasy dia vita amin'ny akora vita amin'ny vy tsy voadio ary azo takalo.
fametrahana Ny milina fanala dia azo ampifandraisina mivantana amin'ny herinaratra, milina fampangatsiahana, rivotra ary slurry.
Fantsona mangatsiaka Ny fantsona mangatsiaka dia vita amin'ny nikela madio, miaraka amin'ny rindrina vita amin'ny chromium mafy sy ny faritra malama, izay manome fifanakalozana hafanana tena tsara sy vokany mangatsiaka mahomby ho an'ny akora mifangaro gilasy.
hihena rafitra Mba hanomezana fahafaha-mihena azo antoka mba hahazoana antoka fa ny gilasy dia manana mari-pana na tsy fitoviana. Rehefa mijanona ny masinina na mihidy tampoka ny rafi-pamangatahana (ohatra ny fanidiana tampoka) dia ampiasaina ny defrosting amônina mafana hisorohana ny hatsiaka. Ny amoniaka ranoka dia tokony tsy hisy bubble ary tsy tokony ho ambany ny tsindry
mihoatra ny 4 bar (58 psi). Ny mari-pana miompana amin'ny milina fanala dia -34 ℃ (-29 ℉).
Drive Ny rafitra mitondra fiara dia alefa mivantana avy amin'ny motera lehibe mankany amin'ny blender amin'ny alàlan'ny fehikibo fehikibo.
Paompy miditra sy mivoaka Izy io dia vondrona paompy fitaovana. Afaka manonitra ny akanjo mahazatra amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny banga. Ny faritra anatiny ao amin'ny paompy vy tsy misy fangarony dia tsaboina miaraka amina fizotrany manokana hampihenana ny akanjo sy rovitra.
Pause Ajanony vetivety ny masinina mandritra ny famokarana mba hiantohana ny fatiantoka faran'izay kely amin'ny akora gilasy sy ny fahamendrehan'ny kalitao.
2000 litatra isan'ora (galona 528 US)
Ireo vokatra dia mifototra amin'ireto fepetra manaraka ireto:
Ny mari-pana miditra amin'ny slurry +5 ℃ (+41 ℉) Ny maripana avoakan'ny gilasy -5 ℃ (+23 ℉) Ny hafanana miakatra -34 ℃ (-29 ℉)
Ny atin'ny solika ao amin'ny amoniaka <30 PPM tahan'ny fanitarana 100%
Condition ny slurry Amin'ny ankapobeny, ny ranomandry gilasy dia misy zavatra marim-pototra 38%. Ny tena mari-pamoahana sy ny hafanana dia miankina amin'ny volon'ny gilasy.
Standard famolavolana Ankoatry ny endrika mahazatra voalaza, Frunt ™ -N2 misy koa ireto manaraka ireto.
Compressed rivotra Fehezo ny tahan'ny fanitarana ary CIP paompy (raha omena) amin'ny rivotra voafehy. Fanaraha-maso tontonana Ny fiasan'ny fitaovana rehetra dia tanterahina amin'ity takelaka ity, ao anatin'izany ny refy fandrefesana ny enta-mavesan'ny motera, ny manometera amin'ny rivotra, ny paompy, ny bokotra ON / OFF an'ny motera lehibe, ny fanitsiana ho an'ny fifehezana ny fampangatsiahana sy ny fikorianan'ny paompy.
paompy fiara Ny herin'ny famahana sy ny famoahana paompy dia avy amin'ny mpanamory motera fitaovana amin'ny alàlan'ny mpanova matetika. Ny habetsaky ny fifehezana ny fiovaovan'ny hafainganam-pandehan'ilay paompy famahana sy famoahana dia azo apetraka ho 10-100%.
Fahaizan'ny mampifangaro paompy Slurry 120-1200 litatra isan'ora (galona 32-317 US).
Standard piesy detase Ny andiana kojakoja sy fitaovana, kodiarana fehikibo ampiasaina hanovana ny tsindry fantsona mangatsiaka sy kodiarana fehikibo ampiasaina hampihenana ny hafainganam-pandeha mifangaro dia ao.
Fitaovana azo ampiasaina tsy ampiasaina ao amin'ny paompy manampy Frunt ™ -N2 Material
Ny paompy mivantana ny zava-manitra sy palety misy fofona manitra tsy misy fangarony ao anaty fantsona mangatsiaka.
Valizy piste Tee Mifandray amin'ny fantsom-pamokarana gilasy
Fampisehoana ny fanatanterahana tsindry Mifandray amin'ny fantsom-pamokarana gilasy Fampisehoana ny fanatanterahana hafanana Mifandray amin'ny fantsom-pamokarana gilasy Aeratera mitohy (Naorina-in)
Ranomandry fanosotra Separator Tsinjarao ho an'ny tsipika roa samy hafa ireo gilasy efa namoaka ary fenoy ny gilasy
Emergency Mijanòna miditra tsimoramora Ho an'ny rafitra mangatsiaka
Freon fampiharana Azo ovaina izy io ho azo ampiharina amin'ny milina Freon-type, izay misy fiatraikany kely amin'ny fahaiza-manao.
Fikambanana miditra tsimoramora TüV Ny valizy fanamaivanana dia tokony hapetraka ao amin'ny rafitra fampangatsiahana mahazatra hanaraka ny fepetra takiana amin'ny fampangatsiahana eo an-toerana.
manao firaisana nanam faritra Ampiasaina amin'ny fikojakojana 3000 na 6000 ora
Moto lehibe 22 kilowatt
Motera paompy 1,5 kilowatt
Famatsiana herinaratra mahazatra 3-dingana 380 V, fantsona 50 Hz Amonia:
Sodina miverina amin'ny rivotra ivelany 76 mm3 santimetatra
Sodina miditra tsiranoka ivelany 20 mm3 / 4 inch
Sodina rivotra mafana ivelany 20 mm3 / 4 inch
Fantsona ivelany mikoriana 20 mm3 / 4 inch
Sodina valizy fanampiana ivelany 25 mm1 santimetatra
Fantsom-batana ivelany 38 mm
1.5 mirefy fantsom-panafahana ivelany 51mm2 inch
Fantsona fidirana rivotra ivelany 12 mm 1/2 inch
Fanjifana rivotra 3.5 m3/ h 124 santimetatra toratelo / h
Previous: Runjin © Krunt ™ -N1200 Ice Cream Freezing Machine
Manaraka: Runjin © Krunt ™ -EX800 Extrusion and Slicing Line ho an'ny gilasy